SPORTS MYANMAR - Page 843 of 864 -
မက်ဆီသာ ကမ္ဘာ့ဖလား မဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင် ဘောလုံးလောကကြီးက မတရားဘူးလို့ ဆိုလိုက်တဲ့ အူစတာရီ
March 27, 2020 March 27, 2020 - by Editor
အာဂျင်တီးနား ဂိုးသမား အော်စကာ အူစတာရီ က အကယ်၍ လီယွန်နယ်မက်ဆီ အနေနဲ့ ကစားသမား ဘ၀ မကုန်ဆုံးမီ ကမ္ဘာ့ဖလား မဆွတ်ခူး နိုင်ခဲ့ဘူး ဆိုရင် ဒါဟာ တရား မျှတမှု ရှိမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ အခိုင်အမာ ဆိုလိုက် ပါတယ်။ ဘာစီလိုနာ စတားဟာ ကလပ် အသင်းနဲ့ အတူ အောင်မြင်မှု များစွာ …
ဆရာ့စကား နားမထောင်ခဲ့လို့ ဗလန်စီယာမှာ ဒုက္ခရောက်ခဲ့တဲ့ ဂယ်ရီနဗီးလ်
March 27, 2020 - by Editor
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းရဲ့ ညာခံစစ် ကစားသမား ဟောင်း ဖြစ်တဲ့ ဂယ်ရီ နဗီးလ် က ဗလန်စီယာ အသင်း ကို ကိုင်တွယ် ခဲ့တဲ့4လတာ အချိန် ကာလ အတွင်း သူဟာ နည်းပြ ဟောင်း ဖြစ်သူ ဆာ အဲလက်စ် ဖာဂူဆန် ရဲ့ အကြံပေး မှု …
လူးဝဇ် ဆွာရက်ဇ်အတွက် ပေါင်သန်း ၄၀+၁ ပေါင် နဲ့ ကမ်းလှမ်းခဲ့တဲ့ အာဆင်နယ် အသင်းလုပ်ရပ်ကို ဝေဖန်လိုက်တဲ့ အီယန်ရိုက်
အာဆင်နယ် အသင်း တိုက်စစ်မှူးဟောင်း အီယန်ရိုက် က ၂၀၁၃ ခုနှစ်တုန်းက လူးဝဇ် ဆွာရက်ဇ် ကို ခေါ်လို့ ရနိုင်တဲ့ အနေအထားမှာ ရှိနေရဲ့သားနဲ့ အံ့ဩသင့်ဖွယ် ပြောင်းရွှေ့ကြေးနဲ့ ကမ်းလှမ်းခဲ့တဲ့ အသင်းရဲ့ လုပ်ရပ်ဟာ ရယ်ဖွယ်ရာ ဖြစ်ကြောင်း ဝေဖန် လိုက်ပါတယ် ။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တုန်းက အာဆင်နယ် အသင်းဟာ လီဗာပူး တိုက်စစ်မှူး …
ဇန်နဝါရီ အပြောင်းအရွှေ့ အတွင်း သူ ချယ်လ်ဆီး အသင်း မှာ မြင်ချင်ခဲ့တဲ့ ကစားသမား က ဘယ်သူလဲ ဆိုတာ ဖွင့်ဟလာတဲ့ #ပိုယက်
ယခုနှစ် ဘောလုံး ရာသီ ကို ကစားသမားသစ် ခေါ်ယူခွင့် မရပဲ စတင်ခဲ့ရတဲ့ ချယ်လ်ဆီး အသင်း ဟာ ဒီဇင်ဘာလ အတွင်း မှာတော့ Transfer ban အတွက် အယူခံ ဝင်ခဲ့ပြီး ၊ အယူခံလည်း အောင်မြင်ခဲ့ပေမယ့် ၊ ဇန်နဝါရီ အပြောင်းအရွှေ့ အတွင်း မှာ ကစားသမားသစ် တဦးတယောက် မှ …
Lockdown လုပ်ခံထားရတဲ့အချိန်မှာ အသင်းသားတွေကို ဘယ်လို အိမ်စာတွေ လုပ်ခိုင်းထားသလဲ ဆိုတာ ပြောကြားလိုက်တဲ့ အာတီတာ
အာဆင်နယ် အသင်း နည်းပြ အာတီတာ က ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက် ပျံ့ပွားနေမှုကြောင့် ဘောလုံးပွဲတွေ ၊ လေ့ကျင့်ရေး အစီအစဉ်တွေ ရပ်နား ထားတဲ့ အချိန်မှာ ကစားသမားတွေကို အိမ်မှာ လေ့ကျင့်ရေး အစီအစဉ်တွေ လုပ်ဆောင်ကြဖို့ ညွှန်ကြား ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ် ။ အာဆင်နယ် အသင်း နည်းပြ အာတီတာ ဟာ …
ဆန်ချို ပြောင်းရွေ့သင့်တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ကလပ် နဲ့ ယူနိုက်တက်တို့ ခေါ်ယူသင့်တဲ့ ကစားသမားကို ပြောပြလိုက်တဲ့ ဟက်စကီး
လီဗာပူး တိုက်စစ်မှုးဟောင်း ဖြစ်သူ အမ်မလီ ဟက်စကီး က ဘိုရပ်ရှားဒေါ့မွန် ကြယ်ပွင့် ဂျေဒွန် ဆန်ချို အနေနဲ့ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် ကို ငြင်းပယ်ကာ လီဗာပူးကို ပြောင်းရွေ့ သင့်တယ်လို့ တိုက်တွန်း လိုက်ပါတယ်။ ယူနိုက်တက်ဟာ လာမည့် အပြောင်းအရွေ့မှာ အင်္ဂလန် နဲ့ ဒေ့ါမွန် တောင်ပံ တိုက်စစ် ကစားသမား ကို ခေါ်ယူဖို့ …
သီးသန့် နေထိုင် နေရချိန်မှာ အသင်းသားတွေလေ့ကျင့်မှု မပျက်အောင် ဆိုးရှား ဘာတွေ လုပ်ကိုင်ပေးနေသလဲ ?
ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ခြိမ်းခြောက်မှုကြောင့် ဘောလုံး အသင်းတွေ ဟာ သူတို့ရဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း အစီအစဉ် တွေ ကို ဖျက်သိမ်း ပြီး ကစား သမားတွေ ကို နေအိမ် မှာသာ နေထိုင် လေ့ကျင့် ဖို့ ညွှန်ကြား ခဲ့ကြ ရပါတယ် ။ ဒီအထဲ မှာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် လည်း …
ယူနိုက်တက်နဲ့ ပတ်သက်လို့ အထူူး နောင်တရမိခဲ့တဲ့ အရာ တစ်ခုကို ထုတ်ဖော် ပြောကြားလိုက်တဲ့ ဂန္ဓဝင် ဂိုးသမားဟောင်း ပီတာ ရှမိုက်ကယ်
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ရဲ့ ဂန္ဓဝင် ဂိုးသမား ဟောင်း ဖြစ်သူ ပီတာ ရှမိုက်ကယ် က 1999 ခုနှစ် ၊ နွေ ရာသီ တုန်းက သူဟာ အသင်း မှ ထွက်ခွာ ခဲ့တဲ့ အပေါ် အထူး နောင်တရ မိကြောင်း ၊ သူဟာ ယူနိုက်တက် အသင်း …
လစာငွေ လျော့ချရေးကို ငြင်းဆန်နေတဲ့ ဘာစီလိုနာ အသင်းသားများ
ဘာစီလိုနာ အသင်း ရဲ့ ကစား သမားတွေ ဟာ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် သီးသန့် နေထိုင် စောင့်ကြည့်ရေး ကာလ အတွင်း မှာ လုပ်ခ လစာ လျော့ချမှု နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကလပ် အသင်း ရဲ့ အဆို တင်သွင်း ထားမှု ကို ငြင်းဆန် ခဲ့ကြ တယ်လို့ သိရ …
ချယ်လ်ဆီး နဲ့ စာချုပ်သစ် မချုပ်တော့ဘူး ဆိုတဲ့ သတင်း တွေဟာ စပိန် သတင်းဌာန ရဲ့ ဘာသာပြန် အမှားသာ ဖြစ်တယ် လို့ တုန့်ပြန်လိုက်တဲ့ #ပတ်ဒရို
ချယ်လ်ဆီး အသင်း ရဲ့ ဝါရင့် တောင်ပံ ကစားသမား ပတ်ဒရို ဟာ ဒီနှစ် ဘောလုံး ရာသီ အကုန် မှာ အသင်း နဲ့ စာချုပ် သက်တမ်း ပြည့်မြောက်တော့မှာ ဖြစ်ပြီး ၊ စာချုပ်သစ် ချုပ်ဆိုဖို့ အတွက်လည်း အခုအချိန် အထိ ထူးခြားတဲ့ တိုးတက်မှု အခြေအနေ တွေ မမြင်တွေ့ရသေးပါဘူး …
ကွင်းပေးသုံးမယ့် ရီးရဲ ၊ လစာလျော့ယူမယ့် အသင်းများနဲ့ . . . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ
ဂျာမန် ဘွန်ဒစ်လီဂါ ကလပ်တွေ ဖြစ်တဲ့ ဒေါ့မွန် ၊ ဘိုင်ယန် မြုးနစ် ၊ ရက်ဘူး လိုက်ပ်ဇစ် နဲ့ လေဗာကူဆင် တို့က ကစား သမားတွေ ဟာ အဆင့် နိမ့်တန်း လိဂ် တွေ က ကလပ် အသင်းတွေ ဆီကို လှူဒါန်း ဖို့ အတွက် ( အဆိုပါ …
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် လက္ခဏာတွေ ပြသနေတဲ့အချိန်မှာ ဘယ်လို တုန့်ပြန်ခဲ့သလဲဆိုတာ ပြောကြားလိုက်တဲ့ အာဆင်နယ် နည်းပြ အာတီတာ
အာဆင်နယ် နည်းပြ မီခေးလ် အာတီတာ ဟာ ကြောက်မက်ဖွယ် ရာ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှု ကနေ သက်သာ ပျောက်ကင်း လာခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ် ။ အာတီတာ ဟာ ယခုလ အစောပိုင်း မှာ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် လက္ခဏာ တွေ့ ရှိ ခဲ့ရတာ ကြောင့် သီးသန့် ခွဲခြား …
Previous 1 … 842 843 844 … 864 Next
Copyright © 2021 SPORTS MYANMAR.